8 Beiträge in Somali, Gesellschaft, 5 - 10 Min.
Corona Information Vienna – Somali Edition [Macluumaadka Corona Vienna]
Maxay yihiin kalarada iftiinka ee loo yaqaan AMPEL?
06.10.2020 – Taxanaheena macluumaadka Corona Information Vienna waxaan qeybtaan uga hadlaynaa calaamadaha iyo kalarada iftiin ee lagu muujinayo heerka uu marayo infekshinka Corona magaalooyinka wadanka Austria oo dhan. Hotlines Information AGES…
Qaybta farad ee taxanaha.
14.06.2020 – Taxaneheena macluumaadka Corona ee Vienna waxaan idin kula wadaagaynaa dhawr arrimood oo caafimaadka xilligaan muhiim u ah, sida xaaladaha cilmi nafsiga, rabshadaha qoysaska dhex mara, iyo sida aad iskaga ilaalin karto fayruska.
Shaqooyinka lagu laabtay.
14.06.2020 – Ku dhawaad mudo seddex bilood ah ka dib waxaa furmay shaqooyinka qaarkood. Taxanaheena qeybtiisaan waxaan ku eegaynaa goobaha shaqo ee dib u furmay, kuwa wali xiran iyo goorta laga yaabo ugu dambeyn in dib loo furo.
Waxbarashadii waa lagu laabtay.
27.05.2020 – Qeybtaan waxaan kaga hadlaynaa ku laabashada waxbarashada ka dib in ka badan laba bilood oo lagu jiray bandow. Waxaa kaloo ka helaysaa barnaamijka maanta xeerarka cusub ee ka jira schoola.da iyo nidaamka waxbarasho ee cusub.
15.04.2020 – Taxanaha qeybtiisa afaraad waxaan kaga hadlaynaa iskuulada iyo xanaanooyinka, casharada qaabka loo bixinayo iyo mudada ay xirnaan doonaan. Talooyin dhawr ah oo aad sameyn karto iyo sida aad guriga ilmaha ugu caawin karto.
15.04.2020 – Taxanaha qeybtiisa shanaad waxaan idin kula wadaagaynaa, waxyaabaha been abuurka ah oo ku saabsan caabuqa korona fayras ee dadka jaahwareerinaya ee la faafiyay.
09.04.2020 – Taxahana qaabuqa Corona waxaan qeybtiisa seddexaad kaga hadlaynaa xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha inta lagu jiro bandowga Corona
01.04.2020 – Taxanaha aan kaga hadlayno qaabuqa loo yaqaano Covid 19 wuxuu kaaga jawaabayaa su’aalo aad u muhiim ah oo aad ka qabi karto sida la iskaga ilaaliyo iyo shruucda laga soo saaray sidii loo xakameyn lahaa faafidiisa. Wuxuu saameeyay xanuunkaani…